Ohere Durable Disc Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Ngwaahịa Na Ndị Na-eweta Ọsọ Dị Elu na orylọ Ọrụ | YiZheng
Na Disc Organic & onyinye fatịlaịza Granulator Igwe (makwaara dị ka bọl efere) adopts dum okirikiri aak Ọdịdị, na granulating ọnụego nwere ike iru ihe karịrị 93%.
Gịnị bụ Disc / Pan Organic & Compound Fatịlaịza Granulator?
Usoro a nke diski granulating a kwadebere ya na ọnụ mmiri atọ, kwalite mmepụta na-aga n'ihu, na-ebelata ike ọrụ ma melite arụmọrụ ọrụ. Onye na-emegharị ihe na moto na-eji draịvụ na-agbanwe agbanwe iji malite nke ọma, belata ike mmetụta ma melite ndụ ọrụ nke akụrụngwa ahụ. Ejiri ike nke igwe na-acha efere, nke na-adịgide adịgide ma na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ ezigbo akụrụngwa maka fatịlaịza organic na fatịlaịza ngwongwo, nke e mere na ntọala siri ike, dị arọ ma sie ike, n'ihi ya ọ nweghị eriri arịlịka edozi na ịrụ ọrụ dị mma.
Enwere ike gbanwee ogo nke granulating pan site na 35 Celsius ruo 50 Celsius. The pan rotates na a ụfọdụ n'akuku na kehoraizin chụpụrụ site moto site reducer. Ntụ ntụ ga-ebili yana pan na-agbanwe agbanwe n'okpuru esemokwu n'etiti ntụ ntụ na pan; n'aka nke ọzọ, ntụ ntụ ahụ ga-adaru n'okpuru ike ndọda. N'otu oge ahụ, a na-agbanye ntụ ntụ na nsọtụ pan n'ihi ike centrifugal. Ihe ntụ ntụ na-agbagharị n'otu ụzọ dị n'okpuru atọ ndị a. Ọ jiri nwayọ bụrụ nha achọrọ, wee jubiga site na nsọtụ pan. Ọ nwere uru nke nnukwu granulating, ọnụego granule, ike dị elu, ọrụ dị mfe, mmezi dị mma, wdg.
Etu esi hazie fatịlaịza na fatịlaịza site na iji diski Organic & Compound Fatịlaịza Granulator
1.Raw ihe eji eme ihe: Urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulphate, ammonium phosphate (monoammonium phosphate, diammonium phosphate, na wears whiting, ca), potassium chloride, potassium sulfate na ndị ọzọ ngwaọrụ bụ dakọtara na hà (dị ka ọchịchọ ahịa na ala nke ule nsonaazụ).
2.Raw ihe na-agwakọta: Ngwakọta nke ihe ndị ahụ kwesịrị ịgwakọta iji melite arụmọrụ fatịlaịza nke granulu.
3.Granulation nke akụrụngwa: Akụrụngwa mgbe agwakọtara n'ụzọ ziri ezi ga-ezigara granulator (rotary drum granulator, ma ọ bụ mpịakọta extrusion granulator ma enwere ike iji ya ebe a).
4.Granulation ihicha: itinye granulation n'ime draya, na mmiri dị na granulu ahụ ga-akpọnwụ, nke mere na ike ịgbanye ike na-abawanye ma dị mfe ịchekwa.
5.Granulation jụrụ: Mgbe ihicha, na granulation okpomọkụ bụ kwa elu na granulation dị mfe akpụ. Mgbe ị jụrụ, ọ dị mfe ịkwakọ iji chekwaa na ibufe.
6.Particle nhazi ọkwa: obi jụrụ ahụ e mma ga-graded: na-erughị eru ahụ ga-echi ọnụ n'ala na re-granulated, na ruru eru ngwaahịa ga-yọchaa.
7. Emechara ihe nkiri: The ruru eru ngwaahịa na-ntekwasa ntọt nchapụta na gbaa nke nsogbu dị iche iche.
8.Packaging nke okokụre ngwaahịa: ahụ na-e ọbọp ihe nkiri na-echekwara na ventilated ebe.
Akụkụ nke Disc / pan Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine
1. Akwa arụmọrụ. Igwe okirikiri okirikiri na-agbaso usoro ochichi okirikiri dum, onu ogugu nwere ike iru ihe kariri 95%.
2.The ala nke granulation efere ike site a ọnụ ọgụgụ nke radieshon ígwè efere, nke na-inogide na mgbe oruru.
3. Efere Granulator na-eji akwa iko nchara, mgbochi corrosion na inogide.
4. Akụrụngwa nwere ngwa ngwa. Ọ ga-eji maka granulation nke dị iche iche akụrụngwa, dị ka onyinye fatịlaịza, na nkà mmụta ọgwụ, chemical ụlọ ọrụ, ndepụta, unyi, nkà mmụta banyere ígwè.
5. Ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ụgwọ dị ala. Ike igwe dị obere, ma arụ ọrụ nwere ntụkwasị obi; e nweghị n'efu orùrù n'oge dum granulating usoro, ime ihe siri ike, na mmezi bụ adaba.
Disc / Pan Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Video Ngosipụta
Nhọrọ Disc / Pan Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Model
Dayameta dayameta (mm)
Edge elu (mm)
Rotor Speed ​​(r / min)
Nke gara aga: Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator
Osote: Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator
Okwu Mmalite Kedu ihe eji eji igwe eji ebu Rubber? A na-eji igwe eji eme ihe Rubber Belt maka mbukota, ibudata na ibudata ngwongwo na ebe nchekwa na ụlọ nkwakọba ihe. Ọ nwere uru nke kọmpat, arụmọrụ dị mfe, mmegharị adaba, ọdịdị dị mma. Rubber echebe ebu Machine bụkwa adabara uto ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Rotary Drum Sieving Machine? A na-ejikarị Rotary Drum Sieving Machine eme ihe maka nkewa nke ngwaahịa ndị gwụchara (ntụ ntụ ma ọ bụ granulu) na ihe nloghachi, yana nwekwara ike ịghọta ọkwa nke ngwaahịa ndị ahụ, nke mere na ngwaahịa ndị gwụchara (ntụ ntụ ma ọ bụ granule) nwere ike ịkekọrịta nkewa. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke onwe ...